Guddi loo magacaabey wadahadalka SL
13 Apr 13, 2012 - 11:56:50 PM
DF Somalia ayaa magacowdey maanta guddi ka kooban 7 xubnood oo wadahadl lagala Somaliland sidii uu ahaa qorshaha shirkii London 23 Feb2012.
Madaxweynaha DF Somalia Shariif Shiikh Axmed ayaa maanta 14,April 2012 ku la hadlay saxaafada Muqdisho saaka ayaa shaaca ka qaadey in guddigan ka kooban wasiirada DFKG Somalia uu madax u yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamad Macalin Maxamuud loona magacaabey wadahadalka Somaliland lala yeelanayo.
Puntland labo xubnood oo kamid ayaa 7-da kujira waxan kala yihiin wasiirka Arrimaha gudaha Gen.Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir iyo Dr.Da'ud Maxamed Cumar wasiir qorshaynta iyo xiririka caalamiga ah.
Waxana guddigaan uu London shir kula yeelan doonaa guddiga kale oo horey u soo magacaabey madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo.
Dhinaca kele Shariif Shiikh Axmed Madaxweynaha DFKMG Somalia saaka waxa uu anbabaxey dhinaca Addis Abba ee dalka Ethiopia oo lagu wado inuu ka furmo shir ay leeyihiin madaxda Afrikaanku.
Goor dhow ka filo Garowe Onlne liiska magacyada guddiga wadahadalka Somalia & Somaliland.